Uhlelo intela e -United States, isekelwe esimisweni of ukuxegiswa kwezomnotho. Ingqikithi lesi simiso itholakala ayisebenzisa yesimanje emakethe umnotho nentuthuko nabalawuli. Uhlaka lwenhlangano kohlelo kuhlanganisa izingqimba ezintathu futhi yakhiwa izinhlobo ezinjalo izintela: federal, isimo nemithetho yendawo.
Kusukela yokuma emnandi (kwezomnotho) intela engaba e-US kungase lwenteke ngokusebenzisa izakhi kwezilandelayo:
- ukusetshenziswa kwe-amortization yashesha ka PF, okuyinto kuzokhulisa isabelo izindleko, futhi ngenxa yalokho, ukunciphisa isabelo inzuzo e izindleko izinsizakalo kanye nemikhiqizo yabo. Ngamanye amazwi - inzuzo yentela engenayo kanye ithuluzi ukuze sikhuthaze izimali izinhlangano zabaqashi;
- izinzuzo ezihlobene utshalomali ucwaningo nentuthuko kanye nezinye umsebenzi wokwakha futhi kungaholela wenkululeko Imininingwane kusukela komunye oyedwa intela;
- intela credits amagugu ekhethekile abelwa ukusetshenziswa kulenqubo ukukhiqizwa ngezinye izindlela amandla, inani Imininingwane zazo imayelana amaphesenti angu-50 isitshalo esetshenziswa kanye nemishini.
Yamanje uhlelo intela US ayisebenzisi ngokugcwele amandla lesifunda kanye amaphesenti angu-70 azo zonke imali yentela iya isabelomali sikahulumeni, kulandele lokwabiwa kabusha ngokwengxenye ezingeni indawo kuya uthi.
Eminyakeni yamuva nje kuye kwaba ukwenyuka eziqoqwayo kuya uthi ngokwabo ezindaweni zokuvikeleka kwezenhlalakahle, ezempilo udweshu emphakathini. Nokho, imixhaso kusukela isabelomali sikahulumeni namanje ngempela palpable (langema-70).
Uhlelo intela US kuveza imisebenzi kwezimali isimo, okuyinto esekelwe labantu intela (abantu). The main izinhlobo izintela yilezi:
- engenayo intela, okuyinto elakhiwe amaphesenti angu-40 enzuzweni federal isabelomali ezingeni;
- iminikelo yezenhlalakahle ukuba izimali, wenza ezingxenyeni alinganayo njengoba umqashi kanye isisebenzi.
yentela yemali engenayo e-US liyaziwa yinkimbinkimbi ekubalweni isihloko engenayo intela. Lokhu kungenxa ukusatshalaliswa iyunifomu umthwalo onzima wentela ukuba lonke labantu. Kungenzeka ukuba ngakususi imali ethile kusukela imali encane yentela, isicelo eziningana izinzuzo ngabanye, sebenzisa esikalini esikhethekile engenayo entela, okuyizinto kwamaciko kunciphe begodu kukhula iphesenti zentela ejwayelekile. Lomgomo sethulwa ukuze kuvinjelwe ukugwema ukucabanga kanye nokukhokhwa esifike intela.
Uhlelo intela US intela ye abamabhizinisi kuhlanganisa izintela ezilandelayo:
- engenayo intela bezinkampani esibalelwa angu-9 federal isabelomali izimali futhi mayelana 5 amaphesenti imali isimo;
- intela imali etholakale ngokudayiswa yamanani dolobha kwempahla;
- intela State kumsebenzi ibhizinisi, okuyinto kunqunywa inzuzo kanye dolobha.
the yokugcina intela ezimbili, ikakhulukazi abadlale indima "Umlawuli" wabonisa, kanye nemithelela zezimali ngebhajethi amancane.
Izici ezikhethekile kohlelo intela ingafaka indima ezincane mkhuba intela, okuyinto eziphoqelelwe kuphela inani elilinganiselwe izinhlobo nemisebenti kanye netimphahla, isilinganiso sentela ungaphakathi uhla 0% - 8%.
Impahla (impahla) kuyakuba zikhokhe intela esimweni abantu zomthetho. Impahla yangasese izakhamuzi, esetshenziselwa ukusetshenziswa siqu, ayikho ngaphansi intela. I yentela yombuso kungenzeka ekhokhwa kuphela impahla etholwe izakhamuzi ngendlela isipho noma ifa.
Uyini sentela nazingane eRussia?
Umuthi 'Karsil ": ukubuyekezwa kanye izincomo lokusebenza